Olee otú Ọkụ Spotify ka CD Mfe
> Resource> tọghata> Olee Ọkụ Spotify ka CD
Ọtụtụ ndị na-nsogbu n'obi nsogbu a na Spotify bụ tumadi a nwebisiinka echebe music gụgharia ọrụ mgbe ị nwere ike ghara ige ntị Spotify music gụgharia offline. Ya mere o doro anya na, ọ bụ ezi echiche na-esure Spotify music ka CD maka adaba playback, karịsịa mgbe ị na-apụghị jikọọ internet.
Isure Spotify ka CD, ndị ezigbo hassle i nwere ike na-enwe bụ na-Spotify music anya saịtị. Echegbula. Anyị ga-akpa nwere ike ikwu 4 ngwaọrụ ibudata Spotify music. Na n'etiti atụ aro ngwaọrụ, Wondershare TunesGo ike ọ bụghị naanị idekọ Spotify music kamakwa ọkụ music ka CD. Ya mere, ka akpa ahụ otú iji Wondershare TunesGo maka Mac isure Spotify ka CD na mgbe ahụ, ị nwekwara ike ịhọrọ ndị ọzọ music ndekọ ngwaọrụ na ọkụ dere music ka CD site iTunes.
# 1. Wondershare TunesGo maka Mac
1. akpaghị aka download Spotify music na efu àgwà ọnwụ
2. Ghọta song Ama, gụnyere song aha, album nkà na ndị ọzọ.
3. Download dum Spotify listi ọkpụkpọ na gbawara n'etiti songs na-akpaghị aka
5. Ọkụ dere music ka CD-enweghị hassle
Olee otú ibudata Spotify music na ọkụ na-CD
Nzọụkwụ 1. Wụnye na-agba ọsọ ahụ Wondershare TunesGo
Wụnye ihe omume na kọmputa gị site na iji gara aga download njikọ ibudata ya.
Nzọụkwụ 2. Malite ibudata Spotify music
Iji malite, anya maka button sị teepu na gị bụ isi window kpọmkwem na ekpe na elu akụkụ.
Ọzọ, chọọ na-egwu otu online Spotify-akụ. The ndekọ ga-akwụsị na-akpaghị aka ka anya dị ka Spotify akụ na-egwuri nsọtụ. Iji hụ na elu àgwà na mezue dekọrọ-awụ ọsọ n'ugwu, na Spotify akụ na-dere nwere na-akpọ were were.
Nzọụkwụ 3. Ọkụ Spotify music ka CD
Nzọụkwụ mbụ apụtakwa aga taabụ maka Library mgbe ahụ na-achọ Music Toolkit CD burner.
Fanye a ide CD mgbe abụọ-ịpị CD burner. Ọzọ, ikpuru na dobe-awụ ọsọ n'ugwu n'ọbá akwụkwọ nile ụzọ window maka CD burner. Mgbe nke a a rụzuworo, nnọọ pịa Ọkụ na-amalite usoro. Mfe, nri?
Ndị ọzọ Spotify music ndekọ
Deezify bụ a Chrome ndọtị na-enyere gị ibudata music na ọtụtụ weebụsaịtị gụnyere Spotify na Deezer. Ọ bụ nnọọ adaba n'ihi na ị na-eji Deezify ibudata music si Spotify. Ihe ị chọrọ ime bụ iji wụnye a ndọtị na Chrome na-egwu Spotify music na nchọgharị. Mgbe ahụ Deezify ga ibudata music maka gị.
Audacity bụ na-emeghe isi audio nchịkọta akụkọ ma recorder.It-enye gị ohere idekọ ndụ ọdịyo na kọmputa playback. N'ihi ya, ọ bụkwa adabara idekọ online audio si weebụsaịtị ka Spotify. Mgbe music e dekọrọ, ị nwekwara ike idezi na nke a omume na-azọpụta ka WAV ma ọ bụ AIFF faịlụ.
Spoty-mp3.com bụ ihe online ọrụ na-enyere gị ibudata Spotify music na faịlụ MP3. Ị na mkpa ịbanye ya website na mado URL nke Spotify songs ka igbe. Mgbe ahụ, pịa Search na nri na-amalite n'ileru URL. Ke akpatre, a song ndepụta na Download buttons ga-egosi gị ka ị họrọ maka nbudata. Cheta na: Nke a website akwụsịwo na-arụ ọrụ ruru ụfọdụ ihe mere na ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọzọ, anyị ga na-ị emelitere.
Gbalịa Spoty-mp3.com >>
Tụlee 4 Ngwaọrụ ka Download Spotify Music
Wondershare TunesGo maka Mac
Service Ụdị Desktọpụ software Nchọgharị Adon na Imea Desktọpụ software online ọrụ
Main ọrụ Online ọdịyo ndekọ Online audio nbudata Audio edezi na ndekọ Spotify music nbudata
1: 1 Good Ogo Audio
Ọkụ egwú ka CD
Chọpụta Song Info
Ịtọ oge na-Record
Nyefee na iTunes na 1 Pịa
1. dịghị audio àgwà ọnwụ
3. mgbe nile omume mmelite
4. nkwado niile nchọgharị
1. ọzọ edezi ọrụ
2. nkwado niile nchọgharị
2. kọrọ site na ọrụ na-virus ngwa
3. adịghị mfe iji
2. obere atụmatụ
Si n'elu atụnyere table, anyị pụrụ ịhụ na Wondershare TunesGo kwesịrị a kwesịrị ekwesị ngwá ọrụ ibudata Spotify music. Ihe bụ ihe ọzọ dị mkpa, ọ bụ ihe niile na-otu usoro ihe omume na-enye gị ka ọkụ Spotify music ka CD-enweghị hassle.